Kedu ihe kpatara ọdịnaya maka SEO? | Martech Zone
Kedu ihe kpatara ọdịnaya maka SEO?
Friday, May 18, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Akwa chọta site ezigbo enyi Chris Baggott nke Compendium. Ọ bụ ezie na anyị maa ọtụtụ ụzọ aghụghọ aka na ụlọ ọrụ SEO na-eji iji nweta ogo, a ka nwere ọtụtụ puku ajụjụ na injin ọchụchọ kwa ụbọchị site n'aka ndị mmadụ na-achọ ịchọta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Ajuju di iche… ya mere peeji ole na ole nke ihe di uku agagh ebipu ya ozo. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla kwesịrị ịghọ ndị nkwusa n'oge a ma ọ bụrụ na ha nwere olileanya ma ha ga-ewulite ikike na ụlọ ọrụ ha ma rite uru n'ọtụtụ nyocha ndị mmadụ na-eme.
Ihe kpatara ọdịnaya maka SEO, na-enyocha etu ọdịnaya si bụrụ isi maka nchọta njin nchọta. I nwekwara ike ịgụkwu na Brafton's metụtara blog post.
Ozi nkowa mgbakwunye site Brafton.
Tags: content Marketingatụmatụ ọdịnayaecommerceKeywordszuosearch engine njikarịchaA
Onye ọrụ Facebook Facebook
Social Rada jikọtara na NetSuite's SuiteCloud
Mee 18, 2012 na 11: 11 AM
Ezigbo infographic, Douglas. M ga-ekwenye na amụma SEO na ala nke ihe ngosi, ọ bụ ezie na enwere m ike itinye ọdịnaya na akara mmekọrịta n'otu ókèala. Kedu ihe ị chere?
Nchọgharị ọchụchọ ga-amalite ileba anya na ọ bụghị naanị ogo ọdịnaya, agbata, na ihe ndị ọzọ, mana ha ga-etinyekwu ọtụtụ ibu na njirimara akaụntụ mmekọrịta, yana anyị 'Ahụlarịrịrịrị na a na-eji akaụntụ mkpofu akwalite ọdịnaya.
Ihe ngosi nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya ọ ga-adị mkpa karịa ọdịnaya n'onwe ya?
Mee 18, 2012 na 11: 20 AM
Enweghị ezigbo ọdịnaya, echeghị m na ọ ga-ekwe omume inwe mgbaama mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Echere m na ndị mmadụ gbalịsiri ike ime ka ịdị arọ nke akụkọ mmekọrịta dị mkpa ruo ugbu a. Ọ bụrụ n’inweghị ndị na - eso ụzọ siri ike, ị na - abụ ebe nchekwa ihe mkpofu. Enwere m nchekwube na nsogbu 'mmadụ' a dochiri nsogbu 'mgbakọ na mwepụ' nke SEO… na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịmepụta mmeghachi omume 'mmadụ' na mmemme na oge a.
Mee 18, 2012 na 11: 30 AM
Ihe ngosi ndị a na-eji aka eme ihe, ọ bụ ezie? Anụla m ọtụtụ ndị webmasters / seo folks ndị, dịka ọmụmaatụ, kwụrụ ụgwọ maka Mmasị / Echiche na YouTube na Facebook, nke mechara duga na mmasị / echiche.
N'ikpeazụ, akaụntụ ndị ahụ na-eduga na akaụntụ n'ezie.
Nke ahụ ọ gaghị abụ mmeghachi omume nke mmadụ?
Mee 18, 2012 na 2: 29 PM
Ekwetaghị m na ha na-eji aka ha eme ihe dịka ndị mmadụ na-eche. Enwere m ike ịga zụta echiche 5,000 na mmasị na YouTube, mana a) ndị ọrụ YouTube ahụ ọ na-enwe mmetụta? Eleghị anya ọ bụghị. b) Enwere uzu gburugburu ebe otutu otutu saịtị jikọtara na echiche ndị ahụ? Eleghị anya ọ bụghị.
Echere m na ọ dị oke egwu - ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala na-akwụ ụgwọ - na ị nwere ike ịme egwuregwu sistemụ ma nye ndị na-eme ihe ga-eme ka ịpị oku ahụ.
Jun 4, 2012 na 10:47 AM
Na-ekwenye na nyocha gị. Achọpụtara uru nke nnukwu ọdịnaya na ike ya iji dọta ndị isi echiche na ịkụziri ndị na-agụ akwụkwọ. Mgbe ọdịnaya dakwasịrị mmadụ, ha ga-ekenye ya ndị otu mmekọrịta ha na mmetụta ọnụọgụ na-amalite.
Sep 20, 2015 na 2: 51 AM
Ekwenyere m na gị Douglas. Manipulative (ma ọ bụ programmatic) amasị, echiche, rt na wdg ga-ahụrụ site search engines characterizing “ezigbo” ihe nakawa etu esi nke na-elekọta mmadụ n'ókè.
Mee 18, 2012 na 11: 41 AM
enwere ozi bara oke uru ebe a
Jul 14, 2012 na 4: 33 AM
Ekwetaghị m na ha na-eji aka ha eme ihe dịka ndị mmadụ na-eche. Enwere m ike
gaa zụta echiche 5,000 na mmasị na YouTube, mana a) bụ ndị ọrụ YouTube
nwere mmetụta? Eleghị anya ọ bụghị. b) Enwere uzu gburugburu
ọtụtụ saịtị jikọtara na echiche ndị ahụ? Eleghị anya ọ bụghị.